အမျိုးသားများ - မကြာခဏသုတ်ရည်လွှတ်မှုသည် Hangover ကိုဖြစ်ပေါ်စေသလား။ (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်စိတ်ကျေနပ်မှုအပြီးအာရုံကြောဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းခံရသည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုသုတ်ရည်လွှတ်မှုကြောင့်အစားထိုးလျှင်စိတ်ခံစားမှုနှင့်လှုံ့ဆော်သူများကိုရင်ဆိုင်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုဆိုးဆိုးရွားရွားသက်ရောက်စေသည်။ ပထမ ဦး စွာသိပ္ပံကိုကြည့်မယ်၊ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲ၎င်းတို့ထက် ပို၍ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်သူများအတွက်အဘယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိမည်ကိုစဉ်းစားပါမည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်တစ်ဦးပြုပါ အများကြီး လူ့-အထီးလိင်အကြောင်းပိုမိုနားလည်ရန်သူတို့၏ရှာပုံတော်အတွက်အထီးကြွက်အပေါ်စမ်းသပ်ချက်၏။ အများဆုံးတီထွင်ခဲ့တယ်သုတေသနအဖွဲ့များတစ်ခုမှာမက္ကစီကိုစီးတီး၌တည်ရှိ၏။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသူတို့အနေနဲ့ထုတ်ဝေ စိတ်ဝင်စားဖွယ်လေ့လာမှု တစ်ဦးကြွက်ပြီးနောက် (ကြွက်ပုံမှန်အားဖြင့်မိတ်ကိုဘယ်လိုအရာနှင့်သုက် 2.5 မှ7နာရီနှင့်ချီပျမ်းမျှလိုအပ်ပါတယ်) လိင်ကသူ့ကိုယ်သူ satiates ကြောင်းထုတ်ဖော်သူတိုင်းတာသက်ရောက်မှုတစ်ခုကနဦးသံသရာထားပါတယ်။
ပုံသဏ္anာန်သည်ပိုမိုရှည်လျားသောသံသရာ၏ပထမအပိုင်းဖြစ်ပုံရပြီး ၆၆ နာရီကြာသည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းကြွက်၏လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှု (libido) သည်နှေးကွေးပြီးသူသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအမျိုးမျိုးကိုအလွန်အမင်းဓာတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလေးရက်အကြာတွင်သူသည်တစ်ကြိမ်ထက်မကကူးယူနိုင်သော်လည်း၎င်းကိုသူယူလိမ့်မည် 15 ရက်ပတ်လုံး အများဆုံး studliness ပြန်သွားပါ။ သိပ္ပံပညာရှင်များအဆိုအရ:
[နှေးကွေးလိင်စိတ်နှင့် hypersensitivity] နှစ်ဦးစလုံး၏ရှည်လျားသောတည်မြဲဇာတ်ကောင်သာစိတ်ဝင်စားစရာ, အချိန်အတွက်တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားသောဦးနှောက်ကိုပလပ်စတစ်စသောအပြောင်းအလဲ၏ဖြစ်ပျက်မှုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်။
ပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများသည်အာရုံကြောဓာတုဗေဒအဆင့်ပြောင်းလဲမှုများထက်ပိုသည်။ သူတို့ကအာရုံကြောဆဲလ်များအကြား synapses ခွန်အားပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ ယခင်ခဏပါ၏ အဆုံးစွန်သော။ သုတေသီများကပလတ်စတစ်အပြောင်းအလဲများ၏ဤ“ အရက်နာကျခြင်း” သည် ဦး နှောက်၏အလွန်အမင်းခန့်မှန်းခြင်းကိုကာကွယ်သည့်အကာအကွယ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆကြသည် ဆုလာဘ်ဆားကစ်:
ထိုသို့ထင်နိုင် satiation မှသုတ်ရည်ထိကနေရရှိလာတဲ့ရှည်တည်တံ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးက၎င်း၏အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဦးနှောက်ဆားကစ်၏ဆွကျော်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အကာအကွယ်ယန္တရားရှိပါသည်။
အဆိုပါ mesolimbic system ကို [ဆုလာဘ်ဆားကစ်] လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပါအဝင်သဘာဝကဆုလာဘ်များအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးဖွငျ့ဤတိုက်နယ်၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဆွပြီးတိုတောင်းသောကာလ၌သုတ်ရည်လွှတ်ထပ်ခါတလဲလဲလိင်မောကြွက်များအားဖြင့်ပြသမူးယစ်ဆေး hypersensitivity နဲ့တူအောင်အမူအကျင့်ာင်းထုတ်လုပ်, အရာအစဉ် mesolimbic စနစ်အားလှုံ့ဆော်ပေသည်။
Overstimulation overstimulation ဖြစ်ပြီး, လိင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှစ်ဦးစလုံးအကျိုးကို circuitry ရိုက်နိုင်။ သိပ္ပံပညာရှင်များရှိသည်ရရှိလာတဲ့ပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲများအနက် ပြီးသားတိုင်းတာ လိင်၏ဦးနှောက်အတွက်မောကြွက်နေသောခေါင်းစဉ်:
လျှော့ချအန်ဒရိုဂျင် receptor များ
လိင်စိတ်လြော့ကြောင်း opioids အတွက်တိုး။
ထို့အပြင်တစ်ဦးအပြည့်အဝအကြံပေးအဖွဲ့နှင့်အတူကြွက်တစ်ဦး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဆုလာဘ် circuitry ၏လျှပ်စစ်ဆွတုံ့ပြန်ကြလိမ့်မည်သော်လည်း လိင်ဝကြွက်မ။ သူ၏ ဦး နှောက်၏ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုမှာထုံနေသည်။
စကားမစပ်, အခြို့သောအပြောင်းအလဲတဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်စတင်. Opioids ချက်ချင်းမြင့်တက်လာနှင့်အန်ဒရိုဂျင် receptor များစတင် တစ်တိုးတက်သောကျဆင်း, ယောက်ျားလိင်သူတို့ကိုယ်သူတို့လောင်ကျွမ်းအဖြစ်အပိုဆောင်းဦးနှောက်ဒေသများလွှမ်းခြုံရသော။
Addendum: လေ့လာမှု, ဇွန်လ 2014 ဖြန့်ချိ: အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopaminergic အာရုံခံ၏ Endogenous opioid-သွေးဆောင် neuroplasticity ကသဘာဝနှင့် opiate ဆုလာဘ် (2014) သြဇာလွှမ်းမိုး။
အထီးကြွက်များတွင်တွေ့ရှိချက်များ - သုက်လွှတ်မှုသည်ဒိုင်ဗင်ထုတ်လုပ်သည့်အာရုံကြောဆဲလ်များကိုဆုချသောနေရာ၌ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုစတင်ခဲ့သည် - အထူးသဖြင့် VTA ။ VTA ရှိအာရုံကြောဆဲလ်အလွှာများသည်အရွယ်အစားလျော့နည်းသွားပြီးအနည်းဆုံး ၇ ရက်ကြာနေထိုင်ခဲ့သည် (တိုင်းတာမှုများကို ၁၊ ၇ နှင့်ရက် ၃၀ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်) ။ VTA သည် dopamine အများစုကိုအခြားဆုချသော circuit တည်ဆောက်ပုံအတွက်ထောက်ပံ့သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, သုတ်ရည်လွှတ်တဲ့ (ယာယီ) ကိုညွှန်းသည်ကြွက်ထိုးမော်ဖင်းအကိုက်ဖို့လျော့နည်းတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ခြင်းမှဦးဆောင်အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု numbed ။ စားနှင့်လိင်၏အမှန်တကယ်ပျော်မွေ့အကျိုးကိုဆားကစ်အတွက်ဖြန့်ချိ opioids ကနေပေါ်ပေါက်သော်လည်း dopamine, တဏှာနောက်ကွယ်မှသည်နှင့်လိုသောစိတ်ထားပါ။
အောက်ခြေလိုင်း: သုတ်ရည်လွှတ်တော့ဘူးဖြစ်ကောင်းမှာအနည်းဆုံး7ရက်ပေါင်းကြာမြင့်ခြင်း, အရာဆုလာဘ် circuit ကို dopamine အတွက်ကျဆင်းမှုနှင့်ထုံအပျြောအပါးတုံ့ပြန်မှုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
လိင်စိတ်နိုးထပြီးနောက်ကြွက်၏လိင်စိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားသည် ပထမ ဦး ဆုံးနေ့အတွက်သင်သူ့ကိုသူ့ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်နှိုးဆွပေးနိုင်သည် - ၀ တ္ထုအသစ်တစ်လုံးကိုတပ်ဆင်ပါ။ နို့တိုက်သတ္တဝါတွေဟာသူတို့ရဲ့ပုံမှန်လိင်မှုကိစ္စကိုနေသမျှကာလပတ်လုံး override လုပ်လေ့ရှိတယ် ဆန္ဒရှိအမျိုးသမီးပတ်လည်။ ရာသီအဖော်ရှာစဉ်းစားပါ။
24 နာရီသို့မဟုတ်ဒီတော့ပြီးနောက်သို့သော်မစ္စတာ Rat ယေဘုယျအားဖြင့်ပင်ဝတ္ထုအမျိုးသမီးလျစ်လျူရှု။ လာမယ့်တစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ခုအဘို့, သူကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Doldrums ၌တည်ရှိ၏။ အဆိုပါ Doldrums စဉ်အတွင်းကြွက်ကသာအကြောင်းတတိယတစ်ဦးလက်ခံနှင့်အတူ ejaculate မှစီမံခန့်ခွဲအမျိုးသမီးနှင့်၎င်းတို့သည်ကွိမျသာကလုပ်နိုင်ပါတယ်။
စိတ် ၀ င်စားစရာမှာသုတေသီများသည်ဤ superstuds သည်သန္ဓေတည်ခြင်းမှပုံမှန်အကျိုးကျေးဇူးမရရှိခဲ့ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းသည်ကြွက်များကို mellows, မိမိအစိုးရိမ်စိတ်ကိုလျှော့ချ နည်းနည်းအဘို့။ ဤရွေ့ကားယောက်ျားတွေ စိုးရိမျကျန်ရစ်။ ဤရွေ့ကားကြွက်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးဆုတ်ခွာ၏လိုင်းများတလျှောက်အနိမ့် dopamine လက္ခဏာ evidencing လည်းအခြားအဝကြွက်များထက်မူးယစ်ဆေးပိုမိုတုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်။
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်စမ်းသပ်မှုအထောက်အထားများကပြသသည်မှာ“ ပို၍ ကောင်းသည်မဟုတ်။ ” တကယ်တော့ "ပို" စေပါတယ် ဖျက်သိမ်းရေး အကြိုးခံစားခှငျ့၏။ အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးအယူအဆ: ကောင်းတစ်ဦးအရာ၏သိပ်ရှိနိုငျပါသညျ။ ဘာကြောင့်ဒီအချက်အလက်ကိုမမြင်တာလဲ လိင်-အကြံဉာဏ်ကိုကော်လံသနည်း
သို့သော်လူသားများမဟုတ်ပါ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ကြွက်များကနေ?
ဟုတ်ကဲ့၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖော်ပြခဲ့သည့်မည်သည့်ယန္တရားနှင့်မျှမတူပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကကြွက်တွေကိုအကူအညီမပေးပါဘူး သူတို့ကို သူတို့ရဲ့စိုက်ထူခြင်းနှင့်လိင်စိတ်အတူ။ ဘယ်ကိစ္စမဆို, ပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရ,
တောင်မှကျန်းမာလုလင်တို့ကန့်သတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖော်ပြရန်; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေ၏အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဗဟို dopaminergic လမ်းကြောင်းဟန့်တားမှတဆင့်လိင်စိတ်နိုးထ [Neuroendocrine ကျဆင်းခြင်းပြောင်းလဲ] ။
တစ်နည်းကြှနျုပျတို့လညျး built-in ပါပွီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောအပြီးပြန်လည်နာလန်ထူတဲ့ကာလအားပေးကြောင်းယန္တရားများ။ အဘယ်သူ၏လိင်အသက်သည်နင်္ဂနွေသူ့ရည်းစားမှလာရောက်လည်ပတ်သူပါဝင်ပါသည် (မိမိကိုမိမိတစ်ပါတ်အစောပိုင်းက porn မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတက်ပေးထားခဲ့သောတစ်ခုတည်းကောင်လေးအားဖြင့်ပြန်ပြောပြကဲ့သို့) ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့အတှေ့အကွုံကိုစဉ်းစားပါ:
ကြာသပတေးနေ့၊ အလုပ်ကနေထွက်သွားတော့ကျွန်မတို့ရှေ့မှာအံ့သြဖွယ်မိန်းကလေး ၅ ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာသတိပြုမိခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းကသူက“ ကြာသပတေးနေ့အကျိုးသက်ရောက်မှု” လို့ခေါ်ခဲ့တယ် သူ၏ရည်းစားသည် Gothenburg တွင်နေထိုင်သောကြောင့်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်သူတို့တွေ့ဆုံကြသည်။ သူကတနင်္လာနေ့မနက်မှာသူကမက်ထရိုမြို့မှာရှိတဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ် ဦး၊ အင်္ဂါနေ့မှာအနည်းငယ်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသူမတွေ့ရတာကြာသပတေးနေ့မှာသူဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်၊ ။
သူ၏အတွေ့အကြုံသည်ဤအစပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သောလေ့လာမှုတွင်ကြွက်များ၏အပြုအမူကိုပြန်လည်အမှတ်ရစေသည်။ သူ၏ပျားရည်ကိုအပတ်စဉ်လည်ပတ်ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်အမျိုးသမီးဝတ္ထုများပင်မကြည့်ပါ။ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲသူမလိင်စိတ်နိုးထလာတယ်။
သံသရာယောက်ျားအတွက်ဘယ်လောက်ကြာလဲ? ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ? ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအနည်းဆုံးတစ်ဦးရှိကွောငျးကိုသိကြပါ7ရက်ကြာ endocrine သံသရာ အထီးသုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်သုတေသီများတစ်ရက်ခုနစျပါးတဝိုက်ပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်း၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်, သေးတသမတ်တည်း, ဆူးကိုရှာဖွေလို့ပဲ။ အဘယ်သူမျှမသေးကြောင်း testosterone ဟော်မုန်းမြင့်တက်မအတိအကျသိ, သို့မဟုတ်အခြားအဘယ်အရာကိုဒိုမီနိုသို့သော်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနေကြသည်။
testosterone ဟော်မုန်း၏ပြောအများဆုံးယောက်ျားတွေယုတ္တိနည်းအသှေးကို testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့် abstinence နှစ်ဦးစလုံးကြောင့်ထိခိုက်သည်ဟုယူဆ။ အင်တာနက်ကဒဏ္ဍာရီအသေခံရန်ငြင်းဆန်။ အဖြစ်မှန်: အားလုံးလူ့နှင့်တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်သုတ်ရည်လွှတ်သို့မဟုတ် abstinence နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်ထိခိုက်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦး မှလွဲ. တနေ့ဆူး, abstinence မဟုတ်သလိုသုတ်ရည်လွှတ်မရှိသည် သွေး၏ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏအပေါ်မည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှု.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံကြောမိတ်လိုက်ယန္တရားမျိုးပွားတိုးမြှင့်ဖို့ပြောင်းလဲကြောင်းစိတ်တွင် Keeping, တစ်ဦးတည်းသာရှိပုံ သဘာဝက တစ်ဝတ္ထုအမျိုးသမီး: နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သော rhythms ပယ်ဖျက်ဖို့လမ်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်မိန်းမဆောင်ခဲ့မဟုတ်လျှင်, သူတို့ကယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သော-မတိုင်ခင်ပြန်ပေါ်လာပြီရောက်ရှိပြီးနောက်၎င်းတို့၏ဦးနှောက်အချို့ပြန်လည်နာလန်ထူအချိန်ကိုခွင့်ပြုဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းခဲ့ကြသည်။
သို့သော်ယနေ့ခေတ်တွင်အသစ်သောမိတ်ဖက်များကမြေသြဇာကိုကလစ်တစ်ချက်ဖြင့်တောင်းပန်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်တုန့်ပြန်မှုနည်းသောအခါ ပို၍ ပင်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုသည်လာမည့် tab တွင်ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားတချို့သည်သူတို့၏“ စစ်မှန်သောလိင်စိတ်နှင့်ထိတွေ့မှု” ပျောက်ဆုံးနေပါသလား။ မည်သည့်မည်သည့်နို့တိုက်သတ္တဝါမှ၎င်း၏ပုံမှန်ကန့်သတ်ချက် ကျော်လွန်၍ ၎င်းအားမီးမွှေးနိုင်သည်။ မုဆိုးစုဆောင်းတဲ့ဆယ်ကျော်သက်များသည်ညအချိန်တွင်သူတို့၏တီကောင်များကို burping များထဲမှတစ်ယောက်တည်းမထိုင်ခဲ့ကြပါ။ မိဘများမပေါ်မီနာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်ကျောင်းမှမိဘများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြည့်ခဲ့ကြပါ။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးမှုကိုတိုးစေပြီးလိင်ဆက်ဆံခြင်းထက် ပို၍ အားနည်းနေသော“ သင်ပြီးပြီ” ဟူသောသတင်းကိုပုံရသည်။ (Prolactin ဖြန့်ချိမှုလေးခုဖြစ်ပါတယ် ဆမြင့် လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်။ ) ကျွန်ုပ်တို့သည်တဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်ကိုယ်တော်လိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့်အစစ်အမှန်အရာများကိုလိုက်လံရန်ကျွန်ုပ်တို့အားမဟန့်တားနိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲလာသည်။
သူကပြောပါတယ်, ထိုအာဖရိကမှာလိင်-အပြုသဘောယဉ်ကျေးမှုရှိပါတယ် တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေမနေပါနဲ့။ ကြက်များတွင်တွေ့ရသောသိပ္ပံပညာရှင်နှင့်ဆင်တူသည့်မိတ်လိုက်ပုံစံကိုသူတို့အနီးကပ်ကြည့်ခြင်းကဖော်ပြသည်။ ဘယ်တော့လဲ "သားသမီးတို့အဘို့ရှာဖွေ,” Aka နှင့် Ngandu အိမ်ထောင်ဖက်များသည်တစ်ညမှနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်တိုင်စုစည်းမိကြသည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကညတိုင်းအဲဒီလိုမလုပ်ဘူး။ ထို့အပြင်မွေးကင်းစလမ်းလျှောက်သည်အထိအိမ်ထောင်ဖက်များအကြားလိင်ဆက်ဆံမှုကိုတားမြစ်သည်။ ချစ်သူများသည်အနားယူရန်ကြာမြင့်စွာအနားယူရသည်။
အချို့သောယောက်ျားများတွင်ယနေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသည် အသစ်အဆန်း-on-ကိုထိပုတ်ပါ သူသည်လိင်ကိစ္စမည်မျှစေ့စေ့စပ်စပ်နေပါစေသူသည်အိမ်ထောင်ဖက်အသစ်များအတွက်ယောက်ျား၏အစာစားချင်စိတ်ကိုနှိုးဆွစေသောနို့တိုက်သတ္တဝါကြီး၏အစီအစဉ်အဟောင်းကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားပုံရသည်။ အကယ်၍ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါကဤအမျိုးသားများသည်ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းချက်ကိုခံနိုင်မည်လော။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် ဦး နှောက်ယန္တရားများကထိန်းချုပ်ထားတဲ့စည်းချက် - သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတာဝန်ပြီးဆုံးပြီးနောက်အချိန် - ထွက်နှင့်အတူ?
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုယန္တရားသည်အရူးမဟုတ်ပါ တကယ်လို့သူတို့ (ငါတို့ရှုထောင့်က) မှကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှအဆီမလာကြဘူး။ ကျနော်တို့က "သူတို့အဘို့, သူတို့ကိုမကြာခဏလုပ်နိုင်, ထက်ကျော်လွန်နိုင်ပါတယ်High-တန်ဖိုးကို” သွေးဆောင်မှု။ ဒါစေသည် ကွဲပြားခြားနားသော supernormal လှုံ့ဆော်မှု နေ့စဉ်အပျော်အပါး-ပင်ကျွန်တော်အလွန်ပျော်မွေ့နေသောသူ။
ဒါဟာရှိသည်ကဤခေတ်သစ်၎င်း၏ Goodies ဖြစ်ပါသည် ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည် သို့ overconsumption ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ ကျွန်ုပ်တို့၏သဘာဝ“ ကျွန်ုပ်ပြီးပြီ” အချက်ပြချက်များကိုပယ်ဖျက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်တွန်းခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ပြီးစားသုံးမှုအလွန်အကျွံသည်နာတာရှည်ဖြစ်လာသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့အန္တရာယ်ရှိသည် ကြာကြာ-ရေရှည်တည်တံ့ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ.
စွဲလမ်းစေသောမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်၎င်းတို့အားယန္တရားများကိုကြီးထွားစေခြင်းသို့မဟုတ်တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းတို့ကြောင့်စွဲလမ်းမှုကိုဖြစ်စေသည်ကိုသတိရပါ ပြီးသားကဲ့သို့သောသဘာဝကဆုလာဘ်များအတွက်အရပျ၌ လိင်စိတ်နိုးထ။ ဤသည်သိပ္ပံပညာရှင်များအကျိုးကို circuit ကိုပုကြောင်းအဆိုပြုထားကြပါပြီအဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမသံသယဖြစ်ပါသည် နောက်ဆုံးဘုံလမ်းကြောင်း ပုလ်မိတ်လိုက်အပြုအမူကိုနားလည်သည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောအခြို့သောအသုံးပြုသူများကို (ဥပမာ၏စုဆောင်းခြင်းအတွက် low-level စွဲ-related အပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်ရန် override ရန်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးစေခြင်းငှါ, DeltaFosB)? ငါတို့တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်းလိင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သည့်ကြွက်များ၏ ဦး နှောက်သည်သူတို့၏သဘာဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုကိုကျော်လွှားသည့်အခါ dopamine နိမ့်ကျခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းစေသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသက်သေထူသည်။
ယနေ့ဆိုက်ဘာ“ အိမ်ထောင်ဖက်များ” ကိုအစဉ်မပြတ်ဓာတ်မြေသြဇာဖြည့်ဆည်းပေးနေသောအမျိုးသားများသည်မကြာခဏအကြိမ်ကြိမ်သုက်ထွက်သည့်အခါအစဉ်မပြတ်အရက်နာကျခြင်းကိုအန္တရာယ်ရှိသလား။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်၎င်းတို့သည်ဆလင်ဒါအားလုံးထက်နည်းပါးစွာဖြင့်ပစ်ခတ်သလား။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်များပြားလှစွာသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်အဖြေမှာဖော်ပြသည့်လက္ခဏာများကိုတင်ပြကြသည် ဟုတ်ကဲ့။ ဒီကောင်လေးရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။
ယနေ့ခေတ်5ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာခံစားခဲ့ရသောဟောင်းများအားလုံးပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည်။ စိတ်ကျရောဂါကမဟုတ်တာကိုငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ခြင်းကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်လို့၊ ဒါဟာအားလုံးငါ့ ဦး နှောက်အကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်မူးရူးပြီးမိနစ် ၃၀ အကြာမှာအရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျပြီးအကြောက်လွန်သွားတယ်။ ငါနောက်ဆုံးတော့ယခုစိတ္တဇထဲမှာ, ဒါပေမယ့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိစ္စအဖြစ်သာမကယခုနားလည်ပါသည်။ ကျွန်တော့်ကိုစိတ်ဓာတ်ကျစေပြီးလူမှုရေးအရအဆင်မပြေစေတဲ့ခံစားချက်တွေကိုအသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏ဖြေရှင်းချက်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ပြtheနာဖြစ်ခဲ့သည်။ အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကကျွန်ုပ်တစ်သက်လုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုမည်သည့်အခါကမျှသံသယမပြုခဲ့ပါ။
တချို့ကယောက်ျားအလွယ်တကူသက်ရောက်မှု reverse နိုင်သည်
Pr0n စက်မှုလုပ်ငန်းသည်အကြွေးဝယ်ကဒ်ပေးသွင်းခကို (ငါတ ဦး တည်းရှိခဲ့ဖူး) နှင့်“ မင်းသမီး” အများစုသည်“ ထူးခြားသောသဘာ ၀၀ န်းကျင်” အားကစားနှင့်တက်တူးများမပါသည့်အချိန်တွင် interwebz ၏အစောပိုင်းကာလများအကြောင်းကိုကောင်းစွာသတိရမိသည်။ ဝမ်း Pierce ။ …လက်ထပ်ပြီးနှစ်အနည်းငယ်မှာ Pr0n ကိုတစ်ပတ်ကြိမ်အကြိမ်ပုံမှန်ကြည့်ခဲ့တယ်။ ငွေတောင်းခံကုမ္ပဏီရဲ့အချက်အလက်ကိုပြတဲ့အကြွေးဝယ်ကတ်ကိုကျွန်တော်ဝှက်ထားခဲ့တယ်။ ငါလျှို့ဝှက်စွာစားသုံးကြ၏။ ဒါဟာတားမြစ်ထားသောစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်နေ့၊ အိမ်ထောင်ရေးဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်ပြီးနောက်အိပ်ရာပေါ်မှာလဲနေပြီး၊ အိမ်ထောင်ရေးနှောင်ကြိုးလွန်ပြီးနောက်မှေးမှိန်သွားသည်။ တစ်စုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်မိသည်။ Teh pr0n ဟာငါ့ရဲ့အစစ်အမှန်ကိုမွေ့လျော်နေတယ်။ မည်သည့်လိင်မှုကိစ္စသို့မဟုတ်အသစ်အဆန်းကိုကြိုးစားခဲ့သည်ဖြစ်စေမလုံလောက်သေးပါ…နောက်ထပ်…နောက်ထပ်… .MORE ငါ girly မဂ်ကိုကြည့်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုတိတ်ခွေကိုကြည့်လေ့ရှိတယ်အခါ, ငါမှာအားလုံးငါ့အစစ်မှန်သောဇာတိပကတိအတွေ့အကြုံများနှင့်အတူမကျေနပ်မှုခံစားချက်သို့မဟုတ်မည်သည့်အခါမျှရှိခဲ့ဘူး။ ငါထိုးထွင်းသိမြင်မှုတစ်ခု flash ကို: Teh Pr0n Insidious ဖြစ်ခဲ့သည်။ [Friggin '] မကောင်းသောအ။
သိပ်မကြာခင်မှာပဲကျွန်မအအေးကြက်ဆင်နုတ်ထွက်။ ငါသည်ငါ၏စာရင်းပေးသွင်းမှုကိုပယ်ဖျက်နှင့်ထို့နောက်ရုံ-ထွန်းသစ်အခမဲ့က်ဘ်ဆိုက်များသို့သွားရောက်ခြင်းတော့ဘူး။ တစ်ပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဒါအတွင်းမှာပဲအိမ်ထောင်ရေးဆက်ဆံရေးနဲ့ငါ့သဘောထားနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုသိသိသာသာတိုးတက်လာသည်။
ငါခြောက်လကြာတည်တံ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပြီးနောက်ညစ်ညမ်းမှစလေ့လာတော့သည်။ ကျွန်တော့်မှာလိင်တူချစ်သူပါ။ ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ ၁၈ နှစ်အရွယ်ညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်တွေလိုယောက်ျားလေးတွေရှိပါလိမ့်မယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှုကိုလုံးဝမထိန်းသိမ်းနိူင်ပါ။ ။ " အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် ၂ ပတ်ကြာညစ်ညမ်း / တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း / အော်ဂဇင်ပုံစံများမပါဘဲသွားလျှင်ကျွန်ုပ်သည်အံ့သြဖွယ်စွမ်းရည်များပြန်ရလာသည်ကိုသေချာစွာသတိပြုမိခဲ့ပြီ။
အခြားယောက်ျားများသည်ပိုမိုကြာရှည်သောပလတ်စတစ် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ကြုံရပြီး၊ စွဲသူများသည်သူတို့ကိုယ်သူတို့အနားယူသည့်အခါပြင်းထန်သောရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့်မကြာခဏဆိုသလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကင်းမဲ့သောရှည်လျားသော“ အပြောက်အကျဲ” များနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ ဒီကောင်လေးဟာစွဲလမ်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီးဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ် -
ခြောက်ရက်ပတ်လုံးမငြီးမငြူစူမိပြီးနောက်ငါသုံးခဲ့တယ်။ ယခုတစ်ရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်သေဆုံးသော်လည်းညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်အားပြင်းထန်စွာတိုက်တွန်းသည်။ ဒါဟာ porn လိုအပ်နေလိင်တံမဟုတ်ပါဘူး။ နည်းလမ်းမရှိ။ ဒါဟာ ဦး နှောက်ပါ။ ဒီမှာကျွန်မရဲ့လက္ခဏာတွေရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ငါအိပ်မောကျတယ် တုပ်ကွေးကဲ့သို့သောလက္ခဏာများ။ ကျွန်တော့်လည်ချောင်းကအရူးလိုပဲ စိတ်ကျရောဂါ။ အရာအားလုံးကိုအမည်းရောင်ကြည့်တယ် ဒါဟာကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အဆိုးဆုံးနေ့လိုပါပဲ။ စိုးရိမ်ပူပန် အကြှနျုပျ၏စကားသံ, f-ed တက်သည်။ တကယ့်ကိုထူးဆန်းတဲ့ဒီဂျာဗူအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်။ အနည်းငယ်ကြယ်ပွင့်တွေအကြောင်းအများကြီးစဉ်းစားခဲ့; သူတို့ကိုငါ့ ဦး ခေါင်းထဲကမထုတ်နိုင်ဘူး အလုပ်လုပ်လို့မရဘူး ကျွန်ုပ်သည်နာမကျန်းဖြစ်။ စနစ်တကျမရှိပါ
ဒါဟာမတရားသောတကယ်စွဲ-ဆက်စပ်ဖြစ်ကြပြီးမိမိတို့အကျိုးကို circuitry တစ်နှေးကွေး dopamine တုံ့ပြန်မှုမှပေါ်ပေါက်သည့်အခါအချို့သောမိုးသည်းထန်စွာ porn သုံးစွဲသူများလိင်စိတ်ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်ဘို့မိမိတို့မြဲမတရားသောမှားစေခြင်းငှါပုံပေါ်ပါတယ်။ Alas, လူ porn မှ ejaculate နိုငျသောအခါ, ဒါပေမယ့် မရကသူ့အဖော်တွေနဲ့သူသည် porn ၏အဆုံးမဲ့အသစ်စက်စက်ကိုသူ၏နှေးကွေးမှုအတွက်“ ကုသမှု” တစ်ခုဟုသူထင်မြင်မိနိုင်သည်။ သူ၏သဘာဝအခြေအနေကိုအချက်ပြမှုများကိုပိုမိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်အမြင်များဖြင့်ထပ်ခါထပ်ခါ (dopamine ပို) ဖြင့်သူသည် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုထပ်မံဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ မိမိအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုက်စား လကြာ။
အင်တာနက်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အကျင့်ကိုစွန့်လွှတ်သောအမျိုးသားများကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း၌ပင်စွဲမြဲနေခြင်းမရှိသောမြူများမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုအစီရင်ခံကြသည်။ သူတို့ပြောပြသည့်အကျိုးကျေးဇူးများသည်အံ့ဖွယ်နည်းပါးသည်။ သူတို့ဟာပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိဖို့၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့နဲ့သြဇာသက်ရောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ခံစားရနိုင်တယ်၊ အိမ်ထောင်ဖက်လောင်းတွေကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်နိုင်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဖို့သူတို့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကတက်လာနိုင်တယ်။ အခြားသူများကမူအားကစားရုံ၌ကြွက်သားများပိုထည့်သည်ဟုဆိုကြသည်။ သူတို့ရဲ့ဆံပင်ပိုမြန်ကြီးထွားလာ; သူတို့ရဲ့အသံတွေကပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိစေပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိစေတယ်။ သူတို့ကဒြပ်မဟုတ်သောလိင်လှုံ့ဆော်မှုများကိုပိုမိုတုံ့ပြန်မှုရှိလာပြီးသူတို့၏လိင်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာသည်။
ဒီလူရိုးရှင်းစွာ Are နောက်ပြန်ဆုတ် ဒီ post ၏အစကတည်းကမှာလိင်ကုန်ကြွက်များတွင်တွေ့မြင် neuroendocrine အပြောင်းအလဲများကို၏မျိုး? လူတို့သညျမှပြန်လာနေကြ သာမန်?
ဤသည်ကိုစဉ်းစားခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ရကျိုးနပ်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြွက်များအနေဖြင့်အများဆုံး virility သို့ပြန်သွားရန် ၁၅ ရက်လိုအပ်သည်။ ဆေးစွဲနေသည့်အမျိုးသားများသည်စင်စစ်အားဖြင့်ပြန်လည်နာလန်ထူရန်အချိန်လိုအပ်သည်၊ သူတို့၏ ဦး နှောက်သည်ကြာရှည်တည်တံ့သောအပြောင်းအလဲများကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်ရန်လပေါင်းများစွာလိုသည်။ အချို့flatline"သူတို့ရဲ့တပ်မက်အခြေချပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပို။ အဘို့။
မှတ်သားဖို့လိုသည်မှာလိင်စိတ်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှု၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည့်နောက်ရှိရင်းစွဲ neuroendocrine သံသရာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ မှလွဲ၍ လူသားများသည် တီထွင်ခဲ့တယ်သုတ်ရည်လွှတ်ဘို့တည်မရ။ တကယ်ပါပဲ, ကရာ စာရေးဆရာက Tim Birkhead ကြောင်းထောက်ပြ:
လူ့သုက်ပိုးထုတ်လုပ်မှုနှုန်းယခုအထိစုံစမ်းစစ်ဆေးအခြားမည်သည့်နို့တိုက်သတ္တဝါများ၏ထက်နိမ့်သည်။ အဆိုပါ epididymis ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့သုက်ပိုးများ၏နံပါတ်များကိုလည်းအနိမ့်ဖြစ်ကြသည်။
ယနေ့အင်တာနက်ပေါ်မှ erotica drip ကိုလွယ်ကူစွာဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းကြောင့်အတွေ့အကြုံရှိသောယောက်ျားများ မလိုချင်တဲ့လက္ခဏာတွေ သူတို့အမြိုးမြိုး-သို့မဟုတ်ပင်တစ်ဦးစွဲနေတဲ့အစဉ်မပြတ် neuroendocrine ရက်နာမှာညပ်မိစေခြင်းငှါရှိမရှိစဉ်းစားရန်မိမိကိုယ်ကိုဖို့ကကြွေး။
ပုံမှန်အပျြောအပါးမှမကြာခဏသုက် numbing သဘာဝအမွတ်မပြေနိုင်သော၎င်းအားသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်လျော့နည်းနှစ်သက်ဖွယ်အောင်နှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုလျော့ကျလာသလဲ? ဥပမာ, အဘို့ဤအချက်အကောင့်ငှါ ကြီးထွားလာလိင်ခြင်းကိုမနှစ်သက် porn-ဖော်ရွေဂျပန်တွင်? ဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့တဦးတည်းကိုငါးအတွက်သြစတြေးလျ porn အသုံးပြုသူများကိုရှင်းပြကူညီ လိင်မှ porn ကိုပိုမိုနှစ်သက်?
၏အလငျး၌ အကျိုးခံစားခွင့်များကျယ်ပြန့် အမျိုးသားများကအင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးနောက်သတင်းပို့ကြသည်။ ယခုခေတ်တွင်လူအများစုကချိုသောဝေဒနာကိုအသေးအဖွဲယားယံအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ ၎င်းသည်အခါအားလျော်စွာမည်သို့ပင်ဖြစ်စေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီးနှာရည်ယိုခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ manseed ကိုထုတ်ယူခြင်းထက်သုတ်ရည်လွှတ်မှုပိုမိုများပြားသည်ဟုထင်ရသည်။
“ လိင်ဆက်ဆံပြီးတဲ့နောက်၊ လိင်ဆက်ဆံမှုပြုတဲ့အခါမှာတောင်မှဘာကြောင့်ဝမ်းနည်းရတာလဲ”
Postcoital Dysphoria: အထီးအကြားပျံ့နှံ့မှုနှင့်ဆက်စပ်မှု
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏အံ့ဖွယ် Rethinking - တစ်ကိုယ်တော်လိင်နှင့်ပတ်သက်သောဒဏ္myာရီငါးခုကိုပြန်လည်စဉ်းစားပါ
ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်သုတ်ရည်လွှတ်အကြိမ်ရေနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏ဆီးရောဂါပါရဂူကိုမေး
တစ်ဦးရှိနေဆဲဟု Post-အော်ဂဇင်သံသရာ၏ကြီးထွားလာသိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထား (လေ့လာမှုစုစည်းမှု)
ဒါ့အပြင်ဖြစ်နိုင်သောအကျိုးစီးပွား: အမြိုးသမီးမြား: orgasm တစ်ခုအားသင် Hangover Give ပါသလား?
Porn အသုံးပြုသူများနှင့်လိင်စွဲသူများအပေါ် ဦး နှောက်လေ့လာမှု
ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်ထိုနေ့၏ ၉၅ ခန့်ကိုအော်ဂဇင်ကင်းသောကုန်လွန်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘယ်လောက်ပဲအိပ်ယာဝင်နေပါစေ၊ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေစေကာမူထိုနေ့ရက်များအတွင်းကျွန်ုပ်သည် ၈ နာရီသာအိပ်စက်နိုင်ပါသည်။ ငါအော်ဂဇင်ပြုခဲ့သည့် ၄-၅ ရက်အတွင်း ၁၀ နာရီလောက်အိပ်မောကျသည်။ အချို့သော“ ကျွမ်းကျင်သော” ဆရာဝန်များနှင့်စိတ်ပညာရှင်များကဤအရာသည် ပို၍ စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဟုပြောလိမ့်မည်၊ အော်ဂဇင်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပဲငါဟာစိတ်အေးလက်အေးရှိလာတယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်နာရီအတွင်း (အထူးသဖြင့်နောက်နေ့မနက်မှာ) ကျွန်ုပ်၏တင်းမာမှု၊ ၁၀ နာရီကျော်ပြန်ပြီးအိပ်ပြီးတဲ့အခါတစ်နေ့လုံး groggy ခံစားရတယ်။
ဟုတ်ကဲ့! ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ပြီးနောက်ဒီနေ့ငါ MAX ၇ နာရီအိပ်တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံနည်းသည်။ ဘယ်တော့မှအိပ်ရာဝင် ဒါပေမယ့်သူကအိပ်စက်အနားယူနေရတယ်လို့ခံစားရတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကကျွန်တော်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါ ၁၀-၁၂ နာရီအလွယ်တကူအိပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်း / တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတဲ့လ + ပြီးနောက်:
ငါမတွေ့ရတာကြာပြီ၊ ကြာကြာမကြည့်နိုင်တော့ဘူး၊ အစပိုင်းမှာငါနေ့တိုင်းနံရံဒါမှမဟုတ်ငါ့မျက်လုံးအိမ်တွေကိုစိုက်ကြည့်ချင်တယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ ယခုတွင်ငါသည် ၁၄ ရက်တကြိမ်တခါတလေတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးတစ်နေ့တာတိုးပွားလာသည်။ ငါကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူး၊ porn မပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာဟာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မကိုင်တွယ်တတ်လို့ပါ
သမားရိုးကျလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လူတစ် ဦး မည်မျှကြည့်ရှုနိုင်သည်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိရသည်။ အော်ဂဇင်ပြီးနောက်ရောဂါလက္ခဏာများ - ကျွန်ုပ်သည်အော်ဂဇင်ပြီးလျှင်အိပ်ပျော်။ လမ်းလျှောက်ရန်မလာလျှင်ကျွန်ုပ်တွင်အောက်ပါခံစားချက်များရှိသည် -
အကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာယေဘုယျအားဖြင့်တင်းမာနေသည်။ အဘယ်သူမျှမအာကာသမျှ mobility, ငါ၌ရှိပါသည်။
ငါ, ငါ၏အလုပ်အကိုင်၌ငါ့ကြားဆက်ဆံရေး, ငါ့လူနေမှုအာကာသ, ငါ့ဘဝအပေါ်သံသယရှိသည်။ ထိုသို့အဖြစ်အဘယ်အရာကိုမျှအကောင်းပုံရသည်။
ငါတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုကင်းမဲ့နေသည်။ ငါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းမရှိခံစားရတယ်။ ငါအရာရာအလွန်အကျွံဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုကြောက်လန့်ဖြစ်၏။
ငါတော့ဘူးငါချစ်ရာသခင်ကိုကြည့်ချင်ကြဘူး, ငါကသူ့ကိုမှာကြည့်ဖို့ခဲတတ်နိုင်ပါ၏။ ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာကျင့်ကိုကျင့်လျှင်, ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူမ၏မမြင်မိပါဘူး။
ငါ (အနည်းဆုံး) ပြန်လည်ကောင်းမွန်ပြီငါအတောမသတ်ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်စတင်အဆက်အသွယ်ကိုရှောင်ကြဉ်ကုန်မှီတိုင်အောင်ငါ 2-3 ရက်ပေါင်းအကြောင်းကိုလိုအပ်ပါတယ်။